China 8011 Aluminium Foil yeChikafu Package fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Aluminium foil inogadzirwa nekukunguruka pepa ingots inokandwa kubva kusimbi yakanyungudutswa billet aluminium, yobva yatenderedzwa papepa uye foil inokunguruka zvigayo kuhukobvu hunodiwa, kana nekuramba vachikanda uye kutonhora kukunguruka.
Aluminium foil ifirimu resimbi rakapfava, iro risingangove nemabhenefiti ekudzivirira kunyorova, kusapinda kwemhepo, shading, abrasion resistance, kuchengetedzwa kwezvinonhuwira, kusava nemhosva uye kusanaka, asi zvakare iri nyore kugadzira mapatani akanaka uye mapatani emavara akasiyana nekuda kwekunaka kwayo sirivha. white luster.
1.Zvinhu: 1000, 3000, 5000, 8000 Series
Aluminium foil ine chitarisiko chakachena, chine hutsanana uye chinopenya.Inogona kugadzirwa kuita yakasanganiswa yekurongedza zvinhu nezvimwe zvakawanda zvekurongedza zvinhu, uye kudhinda kwepamusoro kwealuminium foil kuri nani pane zvimwe zvinhu.Mukuwedzera, aluminium foil ine zvinotevera maitiro:
1. Pamusoro pealuminium foil yakachena zvakanyanya uye ine hutsanana, uye hapana mabhakitiriya kana tupukanana tunogona kukura pairi.
2. Aluminium foil isiri-chepfu yekuputira zvinhu, izvo zvinogona kutarisana zvakananga nechikafu pasina njodzi kune hutano hwevanhu.
3. Aluminium foil chinhu chisina kunaka uye chisina kunhuhwirira chekurongedza, icho chisingazoite kuti chikafu chakaputirwa chive nekunhuhwirira kwakasiyana.
4. Kana iyo aluminium foil pachayo isingashanduki, iyo uye zvokudya zvakaputirwa hazvizombooma kana kuderera.
5. Hazvina mhosva pakupisa kwepamusoro kana kupisa kwakadzika, hakuzovi nekupinda kwemafuta mualuminium foil.
6. Aluminium foil ndeye opaque packaging material, saka yakanaka kurongedza zvinhu zvezvigadzirwa zvinovhenekerwa nechiedza chezuva, semajarini.
7. Aluminium foil ine plastiki yakanaka, saka inogona kushandiswa kurongedza zvigadzirwa zvemhando dzakasiyana.Inogonawo kugadzirwa mugaba remhando dzakasiyana pakuda.
8. Aluminium foil ine kuoma kwakanyanya uye kusimba kwesimba, asi simba rayo rekubvarura idiki, saka zviri nyore kubvarura.
9. Iyo aluminium foil pachayo haigoni kuvharwa nekupisa, uye inofanira kunge yakaputirwa nezvinhu zvinopisa, zvakadai se pe, zvisati zvavharwa nekupisa.
10.Kana aluminium foil inosangana nemamwe masimbi anorema kana simbi inorema, panogona kunge paine maitiro akashata.
Aluminium foil inoshandiswa zvakanyanya mukudya, zvinwiwa, fodya, mishonga, mahwendefa emifananidzo, zvinodiwa zvemumba, nezvimwewo, uye inowanzoshandiswa sechinhu chayo chekuisa;Electrolytic capacitor zvinhu;Insulation zvinhu zvezvivakwa, mota, ngarava, dzimba, nezvimwe;Inogona zvakare kushandiswa sekushongedza goridhe nesirivheri shinda, Wallpaper, yekushongedza trademark yeakasiyana stationery akadhindwa zvinhu uye akareruka maindasitiri zvigadzirwa, nezvimwe.